I-china nano glass countertop yomvelisi kunye noMthengisi | EMontary
Imiphezulu yeetafile zekhitshi zeNano zinomdlalo omhlophe ococekileyo, yakha indawo eqaqambileyo necocekileyo yegumbi lokuphekela. Ilitye leglasi leNano linobuninzi kunye nokufunxwa kwamanzi, ngoko ke akukho mfuneko yokuba nexhala ngokudaya kunye nokubuna. Ukupheka kushushu kakhulu, kodwa ilitye leglasi le-nano liyakwazi ukumelana namaqondo obushushu aphezulu njenge-300 degress.
Sisebenzisa izixhobo ezinkulu zoomatshini, ulawulo lwedijithali, ubungakanani obuchanekileyo bokusika imiphezulu yeetafile kunye nokusetyenzwa komphetho, ukubonelela ngokwanelisayo kumgangatho ophezulu wekhabhathi yeglasi yekhitshi.
Umzekelo No: UMTL-QN0364
Ukulungiswa kwewayini yeglasi yekhitshi yokwenza:
Inyathelo 1. Hlanganisa umgubo we-quartz kunye nentlaka, inyibilike kubushushu obuphezulu kwaye uqengqele kwisitya.
Inyathelo 2. Qinisekisa ubungakanani beplate, 12-30mm.
Inyathelo 3. Ukucoca umphezulu weplate, usike kubungakanani be-2400/2600/2800/3000 * 1200 / 1400/1500 / 1600mm kwi-slabs ezinkulu.
Inyathelo 4. Ukusika ubungakanani betafile yekhitshi njengemfuno yabathengi.
Inyathelo 5. Ukupakisha i-nano yeglasi ekhishini yokuphrinta kumatyala omthi.
Igama lemveliso Iiglasi zeNano ezingento yanto
Izinto eziphathekayo I-Nano icwecwe ilitye leglasi
Umbala Umhlophe omsulwa
Ubungakanani obudumileyo Ubungakanani beComputer Countertop 26 "× 78", 26 "× 96", 26 "× 108", njl.
Itafile ejikelezayo yeTafile 36 ", 42", 48 ", njl.
Isiqithi seCentertop 36 "× 72", 36 "× 78" 42 "× 72", 42 "× 78" njl.
Ikhawuntara yokutya okuncinane I-12 "× 78", 16 "× 78", 18 "× 96" Isiqithi (ibha yokutya), njl.
Imiphezulu yamampunge 25 "× 19" / 22 ", 31" × 19 "/ 22", 37 "× 19" / 22 ", 49" × 19 "/ 22",61 "× 19" / 22 ", njl.
Ukubuyela umva 2 '', 3 '', 4 '', 5 '', 6 '' ukuphakama
Icala lokutshiza 2 '', 3 '', 4 '', 5 '', 6 '' ukuphakama
Ukutyeba 1/2 '', 3/4 '', 1 1/5 ", 2cm, 2.5cm, 2cm + 2cm, 3cm njl.
Gqiba Ikhazimlisiwe, aziwa, yelangatye + ibhrashi, njl
Imiphetho 1 / 4bullnose, ingxangxasi, i-ogee, i-scotia, isiqingatha se-bullnose, i-bullnose ephezulu, i-scotia ephindwe kabini,tyaba, Double bullnose, kabini dupont, kabini kabini ngokupheleleyo njl
Uyilo Itafile, ilize phezulu, ikhitshi ngaphezulu, itafile ephezulu, isinki yamatye, isitya sokuhlamba, njl.Ngaba ngokwabathengi bazoba okanye umbono
Iinkcukacha zephakheji Igwebu ngaphakathi + lekreyithi yomthi eyomeleleyo yokuhamba ngolwandle enemitya eqinisiweyo ngaphandle
Uqinisekiso lomgangatho: Ngexesha lenkqubo yemveliso iphela, ekukhetheni izinto, kungamampunge ukupakisha, Abasebenzi bethu be-QC baya kulawula ngokungqongqo inkqubo nganye kunye nayo yonke inkqubo yokuqinisekisa imigangatho yomgangatho kunye nokuhanjiswa kwexesha.
Wamkelekile kuphando kwaye undwendwele iwebhusayithi yethu ngolwazi oluninzi ngemveliso. Ilitye leLizwe likhangele phambili ekusebenzisaneni nawe.
Ukunikezela ngenkangeleko entle kunye nokuziva kupholile
Unzima kakhulu kwaye uqinile, awunakutshatyalaliswa
Ukugqitywa okuqaqambileyo ngemibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa
Ukuqina okugqwesileyo, kunokuba lula ukuba kungabi yimivumba kunye nokumelana nokukrwela, amabala, ubushushu kunye neentsholongwane. Iasidi, ialkali kunye nongcoliseko olunganyangekiyo luye kwiimo ezahlukeneyo
I-Smooth, solid, seams engabonakaliyo
Ibala elingaphezulu / iibhaktheriya / ukumelana neekhemikhali
Ukugcina ngokulula nokulungiswa
Ukudibana okungabonakaliyo, ukubonakala okuhle ngakumbi
Akukho bubble, icace ngakumbi
1 Sinento yeqela elikhulu lokuthengisa kwishishini elifanayo. Ukunikezela ngenkonzo yokubonelela i-VIP.
2 Amava atyebileyo okuthumela ngaphandle, esele ithumela kumazwe angama-107 kude kube ngoku. Ukunikezela ngokuhambisa ngobungcali, ukulayisha, ukucoca amasiko kunye nenkonzo yokuhlala.
3 Imifanekiso emininzi yemveliso kunye neesampuli ezincinci zesalathiso sakho.
4 Siya kwimiboniso emininzi minyaka yonke, njengeCanton Fair, iXiamen International Fair Fair, i-KIBS, i-BIG5.
5 Izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji Ukunikezela ngeemveliso eziphezulu ze-OEM ngokuthenga kwakho okukodwa.
6 Imibala eyahlukeneyo yesampulu yasimahla yokujonga umgangatho, ukuvavanya kunye nokuthelekisa.
7 Ukunikezela ngengcebiso yobuchwephesha, inkxaso ebanzi yezobuchwephesha kunye nangexesha elifanelekileyo emva kweenkonzo zokuthengisa.
Egqithileyo IMATSHINI YENDALO
Okulandelayo: Itafile yekhitshi yendalo yekhitshi